Kudengenyeka kwenyika kukuru kunotema chitsuwa chevashanyi cheGreek cheKrete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Kudengenyeka kwenyika kukuru kunotema chitsuwa chevashanyi cheGreek cheKrete
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Greece Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dai 2, 2020
Kudengenyeka kwenyika kukuru kwakabatana chiwi cheGreek chitsuwa cheKrete
Kudengenyeka kwenyika kune simba 6.6-ukuru kwakakonzera chitsuwa cheGreek chitsuwa che Krete, ivo European Mediterranean Seismological Center (EMSC) ataura.
Kudengenyeka kukuru kwakanyoreswa Mugovera masikati kuma2pm.
Sekureva kweAthens Geodynamic Institute, kudengenyeka kwenyika kwakaitika makiromita makumi mapfumbamwe kumaodzanyemba kweIerapetra, guta riri kumaodzanyemba mutengo weKrete, pakadzika pakati pe90km ne10km pazasi pegungwa reMediterranean Sea.
Maererano nemishumo, kudengenyeka kwakanzwika muHeraklion neLassithi.
Kudengenyeka kwepasi pamwe nehukuru hwepakutanga hwe4.4 kwakaitika maminetsi gumi mushure.
Somw mishumo inoratidza kuti kudengenyeka kwenyika kwakanzwika kure kure seAlbania, uye Middle East.
IEuropean Mediterranean Seismological Center (EMSC) yakati asi pakanga pasina mhinduro dzekukurumidza kana kukuvara.
Kudengenyeka kwenyika kwakayera 6 pachiyero cheRichter, kwakasunga chitsuwa cheGreek cheKrete masikati ano.
Yake epicenter yaive makiromita 118 kumaodzanyemba kweIerapetra pakadzika kwemakiromita gumi.
Ierapetra iguta riri kumahombekombe ekumaodzanyemba kweKrete.
Sekureva kwevakuru veGreek, pakanga pasina mhedzisiro yekufa, kukuvara kana kukuvara uye hapana yambiro yetsunami yakapihwa.
“Tiri kuongorora zviri kuitika uye takaita matanho ese akarongwa. Zvisinei, kusvika pari zvino pange pasisina kusheedzwa kwekubatsirwa, ”Mutungamiriri weFire Service yeKrete, Demosthenes Bountourakis, akadaro.